PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-01-08 - Ubuholi obusha kwisasfa KZN
Ubuholi obusha kwisasfa KZN
Ilanga langeSonto - 2017-01-08 - Ezemidlalo - PHILANI NCALANE
KUZOKHETHWA ubuholi obusha besouth African Schools Football Association (Sasfa) Kwazulu-natal njengoba buphelelwe yisikhathi ngonyaka odlule obukathembinkosi Zoleka odlule emhlabeni ngasekupheleni konyaka odlule.
Nokho-ke ngaphambi kokuba kukhethwe ubuholi besifundazwe, kumele kukhethwe ubuholi obusha bepinetown District okuyisona sodwa isifunda esingakabukhethi ubuholi obusha.
Isasfa esifundazweni izohlangana ngasekupheleni kwale nyanga noma ekuqaleni kwezayo ukulungisa uhlu lwemidlalo yezikole ukuze luhambisane nolukazwelonke.
Kulindeleke ukuthi isasfa esifundazweni iholwe nguzibuse “Bizzha” Ncube obeyisekela likazoleka.
Isasfa esifundazweni ihudule izinyawo ukukhetha ubuholi obusha njengoba ibilinde umphumela wombango obuphakathi kwesasfa kuzwelonke nesouth African Football Association (Safa) efuna amandla okuphatha ibhola lezikole.
Lo mbango usaqhubeka njengoba isafa iludlulisele phambili lolu daba yize kucaca ukuthi iyahluleka ukusingatha ibhola lezikole.
Uncube ukuqinisekisile ukuthi kumele kukhethwe ubuholi obusha besifundazwe ngoba sekucacile ukuthi isafa iyahluleka ukuphazamisa izinhlelo zesasfa eholwa ngumandla “Shoes” Mazibuko ezingeni likazwelonke.